“Connect Uganda”, Tetikasa Famakiamboky Ho An’ny Tantsaha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Febroary 2014 21:32 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, عربي, Français, English
Miaina sy miasa any ambanivohitra ny ankamaroan'ny olona any Oganda – angamba tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Ahoana – ary inona – no azon'ireo tantsaha avy amin'ny fijerena aterineto ?
Fiofanana tany Kenya. Naparitaka rehefa nahazoana alàlana tamin'ny Maendeleo Foundation.
Mikarakara izay fomba ahazoan'ny tantsaha mitrandraka vaovao momba ny fambolena ao amin'ny aterineto ny Tetikasa Connect Uganda sy ny fikambanan'ny trano famakiamboky. Nametraka takelaka ahazoana herinaratra amin'ny masoandro ry zareo mba handefasana ireo solosaina kely Android mba hidirana amin'ny aterineto sy hanofanana ireo mpiasan'ny tranomboky sy ireo mpikambana ao amin'ilay fikambanana amin'ny fahaiza-mifehy solosaina sy ny fangalàna ny vaovao. Koa satria tsy mahay mamaky teny sy manoratra ny 95%-n'ny tantsaha ( araka ny tatitra avy amin'ny Maendeleo Foundation ), dia hanana anjara goavana amin'ny famakiana sy ny fandikana izany ho amin'ny fiteny mahazatra ny mponina ao an-toerana koa ireo mpiasan'ny tranomboky.
Naparitaka rehefa nahazoana alàlana tamin'ny Maendeleo Foundation.
Mety ho sarotra sy lafo ny hanatratra ireo vondrom-piarahamonina lavitra ho an'ireo mpanentana avy amin'ny fitondrana. Fenoin'ny tetikasa Connect Uganda io fahabangan'ny fanabeazana ny tantsaha io amin'ny fanampiana ireo tantsaha hianatra momba ny zava-baovao azo ampiharina ho an'ny voliny; nanomboka namokatra masomboly vaovao toy ny hazo Sesbania, Calliandra, ary Leuceana ny sasany. Ny tantsaha no tsara toeranaa kokoa handray fanapahan-kevitra mifanaraka amin'izay masomboly hatao, ny fampiharana ary ny tsena handefasana izany mba hahazoana tombony, araka ny fahalalana ny vidin'entana eny an-tsena sy ny fomba fambolena.
Anvonà distrika dimy any Oganda no miasa ny tetikasa izay ny Maendeleo Foundation no mandrindra azy ao : Buikwe, Arua, Namutumba, Kasese ary Alebtong. Mirotsaka an-tsehatra manampy amin'ny fananganana tambajotra amin'ny alàlan'ny aterineto ho an'ny Ogande io fikambanana io izay midika hoe “fandrosoana” ny anarany amin'ny fiteny Swahili. Ny tetikasa Connect Uganda dia vatsian'ny EiFL, ONG mikatsaka ny hanome fahalalàna any amin'ny tany an-dàlam-pandrosoana, amin'ny fiaraha-miasa amin'ny tranomboky ao an-toerana .
Azonao arahana ao amin'ny pejy facebook-n'ny Maendeleo Foundation ny asan'ny tetikasa Connect Uganda.